MOOC EIVASION "aasaaska" waxa u go'ay aasaaska hawo-mareenka macmalka ah. Ujeeddooyinkeeda ugu waaweyn waa in ay bilowdo ardyada:
mabaadi'da ugu muhiimsan ee physiology iyo makaanikada neefsashada si loo tarjumo qalooca hawo-mareenka,
Isticmaalka hababka hawo-qaadista ee ugu muhiimsan ee hawo-qaadista iyo kuwa aan fiicneyn.
Waxay ujeedadeedu tahay inay ka dhigto ardyada inay ku shaqeeyaan hawo macmal ah, si ay u awoodaan inay go'aanno ku habboon gaaraan xaalado caafimaad oo badan.
Hawo-mareen macmal ah ayaa ah taageerada ugu horreysa ee muhiimka ah ee bukaannada halista ah. Sidaa darteed waa farsamo samatabbixin lagama maarmaan u ah dawo-noolaynta degdega ah, daawada degdega ah iyo suuxinta. Laakiin si liidata loo hagaajiyay, waxay u badan tahay inay keento dhibaatooyin oo ay kordhiso dhimashada.
MOOC-dan waxa ay si gaar ah u bixisa nuxur waxbarasho oo cusub, oo ku salaysan jilitaanka. EIVASION waa ereyada soo gaabinta ee Waxbarashada Hal-abuurka leh ee hawo-mareenka Artificial iyadoo la adeegsanayo jilitaanka.
Dhamaadka MOOC EIVASION “asaasiyada”, ardaydu waxay heli doonaan fursad ay ku wanaajiyaan fahamkooda isdhexgalka bukaan-socodka hawo-mareenka iyo ku-dhaqanka caafimaad ee hawo-qaadista MOOC labaad: MOOC EIVASION “heerka sare” ee madadaalo.
Dhammaan macalimiintu waa dhakhaatiir khabiir ku ah dhinaca hawo-mareenka. Guddiga sayniska ee MOOC EIVASION wuxuu ka kooban yahay Prof. G. Carteaux, Prof. A. Mekontso Dessap, Dr L. Piquilloud iyo Dr F. Beloncle
Hawo-mareen macmal ah: aasaaska Diisambar 10, 2021Tranquillus
READ Sideed (dib) ugu bartaa qof weyn inuu si fiican ugu qoro Faransiiska?
horeWarshadaha cuntada: waxay hagaajiyaan waxqabadka tamarta
socdaHawo-mareen macmal ah: heer sare